Klọb abalị Kachasị Ego Ụwa LOUIS XIII iji nye Ultra-Rare Red Decanter N ° XIII
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Klọb abalị Kachasị Ego Ụwa LOUIS XIII iji nye Ultra-Rare Red Decanter N ° XIII
Enwere naanị 200 N ° XIII red decanters dị n'ụwa niile, nke pụtara nkesa bụ naanị otu decanter n'otu klọb kwa abalị.
Cognac LOUIS XIII bụ nsonaazụ nke ndụ nke ọgbọ nke Cellar Masters, na-agwakọta eaux-de-vie kacha mma site na iji mkpụrụ vaịn etolite naanị na Grande Champagne. Ọ dị mkpa ka LOUIS XIII nwee ahụmịhe dị ka emume, na -agbada, iji kpughee ngosipụta ogologo oge na -agbanwe agbanwe nke ụtọ, n'otu oge kacha mma. Ndị ahịa chọrọ ịnwale chi ha site na ịtụ otu n'ime Ahụmịhe N ° XIII nwere ike banye na LOUIS XIII Society* ma ọ bụ zụta ozugbo site na ụlọ oriri abalị. Onye nnochite anya ika nke LOUIS XIII ga -akpọtụrụ onye ọ bụla n'ime ha ka hazie njem a pụrụ iche. Ahụmịhe a dịpụrụ adịpụ nke ukwuu na enwere ohere ịnabata gị n'ozi mbara igwe.
A ga -ekpughere decanter N ° XIII mbụ ga -abata US na Ọktọba 15 na OMNIA na Las Vegas. Maka ozi ndị ọzọ gbasara nnweta ngwaahịa, kpọtụrụ: [email protected]
WELITE oge na oge pụrụ iche
Oge bụ akụrụngwa nke LOUIS XIII, yana N ° XIII na -enye anyị ohere inyocha ngosipụta oge ọhụrụ. A na -akọwa ndụ abalị site na mmetụta nke nnwere onwe, ihe ụtọ na ememme, nke ihe oriri na -atọ ụtọ N ° XIII jidere ma gbasaa: acha ọbara ọbara n'otu n'otu nwere kristal decanter, nke ekpughere n'okpuru mkpuchi mkpuchi LED. Iko kristal isii na -acha ọbara ọbara dị na tray na -enwu enwu so ya, na -apụta n'ihu igwe mmadụ. Red bụ agba akọwapụtara nke ahụmịhe, na -ejide agụụ, ọkụ eletrik na ike ndụ nke abalị. A na -enye LOUIS XIII site na iji pipette cognac pụrụ iche, nke a maara dị ka Spear, iji mee ka emume emume ịdaba na -agbatị. Mgbe ahụ, a ga -edowe ihe ụtọ na ndetu nke cognac dị ịtụnanya. LOUIS XIII na -edozi ụda nke ya n'abalị.
CRAFTED DECANTER n'aka
LOUIS XIII jikọrọ aka na Saint – Louis, onye kacha arụ ọrụ iko na Europe, imepụta N ° XIII na -acha uhie uhie na iko cognac na -acha ọbara ọbara. Enwere ike nweta ihe na -acha ọbara ọbara na -acha ọbara ọbara site na iji usoro nzuzo nke chọrọ mgbakwunye ọla edo. Ọchịchọ nke Saint-Louis nwere maka ọdịnala, savoir-faire na ihe ọhụrụ na-adị ndụ na ihe nrịcha ndị a na-adịghị ahụkebe: fụọ, bee, chọọ ya mma ma jiri aka dee ya, na ọnụ ọgụgụ ya n'otu n'otu, ejiri akara dentelle spikes LOUIS XIII bịanye aka na olu palladium. . N'ịgbaso emume nast nke N ° XIII, ndị ahịa nwere ike jiri decanter N ° XIII ha pụọ ​​n'ụlọ oriri na nkwari abalị (ọ bụrụ na iwu klọb na iwu obodo nyere ohere) dị ka ihe ncheta dị oke mkpa nke abalị kacha echefu echefu. Ihe nkwụsị NFC nyere ikike na -enye onye nwe ya ohere pụrụ iche na LOUIS XIII Society yana uru ndị otu ya niile.
LOUIS XIIII N ° XIII tụrụ aro ire ere dị mgbe a rịọrọ ya.
*LOUIS XIII Society bụ klọb ndị otu nkeonwe maka ndị nwere LOUIS XIII Cognac decanters.